यी ११ मन्त्र जप्नुहोस्, भगवान गणेशको कृपाले तपाईको जीवनमा सुख, शान्ती र धन लाभ हुनेछ - News World Nepal::
यी ११ मन्त्र जप्नुहोस्, भगवान गणेशको कृपाले तपाईको जीवनमा सुख, शान्ती र धन लाभ हुनेछ
यी ११ मन्त्र जप्नुहोस्, भगवान गणेशको कृपाले तपाईको जीवनमा सुख, शान्ती र धन लाभ हुनेछ !! भगवान श्री गणेश बृद्धिका दाता तथा चिन्ता दूर गर्ने देवता मानिन्छन्। भगवान गणेशको आराधनाले बृद्धि विकास हुनुका साथै तपाईको जीवनमा देखिएका सबै बाधाहरु हट्छन्।
यो पनि अवश्य पढ्नुहोला अनि बुझ्नुहुनेछ नेपालको राजनीतिको दुर्दशा
हरेक देशका आ-आफ्नै आवश्यक्ता हुन्छन्। आफ्नै प्राथमिकताका परियोजना हुन्छन्। देश कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन पनि हुन्छन्। समृद्ध देश तब मात्र सम्भव छ, जब हरेक नेपाली समृद्ध हुन्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले न आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छ न भएका नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो देखाउन सकेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्था नै समृद्धिको सुरूआत हो। कसरी सम्भव छ त्यो? नेपालको समृद्धि माथि भनिएका कुराहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अब पनि हामीले हाम्रा सन्तति र हाम्रा विकासको गतिमा कुदिरहेका छिमेकीहरूलाई नहेर्ने हो भने हामी आफैंलाई लाजमर्दो हुने छ। मैले यो देशलाई नेतृत्व गरेर केही गर्न सकिनँ भन्ने हीनताबोधले सधैं पोलिरहने छ। अब त देशका लागि केही गरौं। नियममा थोरै नियत मात्र मिसाए पनि यो देशले काँचुली फेर्छ। अन्तमा, प्रधानमन्त्रीज्यू, रेल र जहाजका कुरा गर्दै गरौंला, पहिले जनताको काज र सरकारको लाज धान्ने कुरा गरौं, साँचो समृद्धिका लागि काम गरौं। (लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन्।)